पत्रकार न्यौपानेको स्कुल बेच्ने बालक – Media Bhav
August 9, 2018 mediabhav समाचार 0
काठमाडौं– लेखक तथा पत्रकार दामोदर न्यौपानेको पुस् तक ‘स्कुल बेच्ने बालक’ बजारमा आएको छ । नेपाल न्यौपानेको पाचौं पुस्तक हालै सार्वजनिक भएको हो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको पुस्तक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा शुरेशराज शर्मा, बालसाहित्यकार विनय कसजु, अक्षरा स्कुलकी प्रिन्सिपल अञ्जु भट्टराइ, बालअधिकार अभियन्ता गौरब पोख्रेल, लेखक न्यौपाने, पुस्तकका मुख्य पात्र साढे चार वर्षिय हार्दिक न्यौपाने र प्रकाशक शिखा बुक्सका पुष्पराज पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
पुस्तकबारे बोल्दै प्राडा. शर्माले आफ्ना छोराछोरीलाई बुझ्न हरेक अभिभावकले ‘स्कुल बेच्ने बालक’ पढ्नुपर्ने बताए । ‘बालबालिकालाई बुझ्नु पर्छ, सुन्नु पर्छ, उनीहरुको मनोविज्ञानलाई केलाउनु पर्छ भन्ने सन्देश पुस्तकमा दिइएको छ’ उनले भने, ‘बालबालिकाको स्वभाव, इमोसन, क्रोध बुझ्न पुस्तकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’
अर्का वक्ता अञ्जु भट्टराइले लेखकले अरु कुनै पनि अभिभावकले नगरेको नौलो काम गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हामी जीवनमा कसैलाइ विश्वास गर्दैनौं । पैसा दियो, तिर्दैन कि जस्तो गर्छाै किनभने हामीले सानामा बालबालिकालाई विश्वास गर्नै गरी हुर्काएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाले सबै काम गर्न खोज्छन् । त्यो बेला हुदैन भन्यो भने उनीहरुमा गिल्टी फिल हुन्छ । उनीहरुमा गिल्टी फिल हुन नदिन हामीले इनिसियसन दिनु पर्छ । प्रारम्भिक बाल्यकाल इनिसियसन भर्सेज गिल्ट को उमेर हो । यो उमेरमा हुदैन भनिदियो भने म क्यापिबल छैन । अभिभावकले विश्वास गर्नु हुन्न । शिक्षकले गर्न दिनु हुदैन भन्ने भावना विकसित भएको छ, हामी असल छोराछोरी खोज्छौं तर हामी असल अभिभावक बन्ने प्रयास कति गरयौं ? असल अभिभावक बन्न पहिला आफू असल अभिभावक बन्नु पर्छ । असल अभिभावक बन्न उनीहरुलाई सुक्ष्म तरिकाले अवलोकन गर्नु पर्छ । सुक्ष्म तरिकाले अवलोकन गर्न सजिलो छैन । यसो गर्नु ठूलो काम हो । यो तीनचार वर्षको बालबालिकाले के सोच्छन् ? यसरी बुझ्दैनौं । उनीहरुलाई फ्युचर जेनेरेशन भनेर भन्छौं तर सम्मान गर्दैनौं । यो चिन्ताको कुरा हो । बालबालिका घरबाट सिक्छन् । समाजबाट सिक्छन् । संसारभरी हुने बालबालिकाको मनोविज्ञानसंग मेल खान्छ । कृष्णलाई पुजा गर्छाै तर अहिलेका बालबालिकालाई हाइपर भन्छौं । मान्दैन । खादैन । जस्ता न लगाएर नकारात्मक बनाइदिन्छौं । यस्तो बेलामा हार्दिक पात्र मार्फत एउटा सन्देश दिनु भएको छ । यो किताबले समाजलाई ठूलो पाठ दिन्छ ।’
बालसाहित्यकार तथा संचारविज्ञ विनय कसजुले बालसाहित्यमा लागेको भए पनि आफूले समेत उठाउन नसकेको कुरा लेखकले उठाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बालबालिका हुर्काइमा मुख्य चुरो कुरो प्यारेन्टिङमा छ । अभिभावकले जान्नु पर्ने कुरा थुप्रै छन् । यसमा अभिावकलाई राख्नु पर्ने कुरा धेरै छन्,’ मान्छे र जनावरको बारेमा फरक देखाउने उनले भने, ‘एउटा गाइले बाछा जन्माउछ । जन्माउनासाथ त्यो बाछी वरिपरि घुम्छ । अनि केही बेरमा दुध खान्छ । मान्छेको बच्चा पनि जुरुक्क उठेर अरु मान्छेसंग भेट्ने हो भने के भन्थ्यो होला ? यो सिक्न उसलाई धेरै वर्ष लाग्छ । बाघले आफ्नो डमरुलाई ताजा मासु खुवाएर ह्ट्टा कट्टा बनाउछ अनि असल बाघ बनाउछन । तर मान्छेले राम्रो खुवाएर पुग्दैन । यही आउछ प्यारेन्टिङका कुरा ।’
हाम्रो समाजमा बालबालिकालाई व्यवहार गर्ने तरिका तेस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो भएको उनले बताए । ‘जसरी बगैचा पूर्ण हुन त्यहा नर्सरी हुन्छ । व्याड हुन्छ । पानी हुन्छ । मल हुन्छ । व्याडमा काम गर्ने माली हुन्छ । मालीले विरुवाको मतलब नगरी फल्ने रुखको मात्रै या गर्दियो भने के हुन्छ ? पक्कै पनि विरुवा पर्छ । विस्तारै नर्सरी उजाड हुदै जान्छ । त्यसै गरी फल दिनेलाई मात्र वास्ता गर्दा के हुन्छ ? हाम्रो समाजमा पनि जसले फल दिएको छैन, उसको रेखदेख भएको छैन । त्यो बर्ग भनेको बालबालिका हुन् । राज्यको नीतिमा पनि यस्तै छ । राज्यले जुन निती बनाएको छ । त्यसमा बालबालिकाको शिक्ष्ाँको कुरा छ । शारिरीक विकासको कुरा छ । तर सामाजिक विकास । बौद्धिक विकास । इमोसनल विकासमा ध्यान दिइएको छैन । कसैले जिम्मा लिएको छैन ।’
बालबालिकाको मस्तिष्क बनाउने आधार बालसाहित्यमा पनि नेपाली लेखकको उपस्थिती कमजोर रहेको पनि उनले बताए । ‘बजारमा गयो भने नेपाली भाषामा लेखिएका बालसाहित्यमा भारतीय पुस्तककको बर्चस्व छ । यो दुखको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था न्यौपानेले लेखेको पुस्तक नेपाली पुस्तकको अभाव रहेको अवस्थामा महत्वपूर्ण पठन सामग्री हो ।’
कार्यक्रममा अन्य वक्ताले लेखक न्यौपानेको कलम निकै बलियो भएको र उनले हाम्रो समाजमा रहेको बालमनोविज्ञानलाई केलाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । लेखक न्यौपानेले बालबालिकाको लालनपालनमा शिक्षाको महत्व कस्तो रहने भन्ने कुरा पुस्तकले उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘किताब लेख्नु एउटा ठूलो संघर्ष हो, मैले त्यो काम पुरा गरेको छु’ उनले भने, ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा केही गर्नु पर्छ । बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ । यही सोचालाई मैले पुस्तक लेखनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाएको हु । अब यहाहरुको साथको अपेक्षा गरेको छु ।’ पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको हो । यसअघि उनको बालबालिका केन्द्रित पुस्तक ‘कर्म’ ले निकै चर्चा कमाएको थियो । यसबाहेक लेखक न्यौपानेका ट्यालेन्ट शो, स्वर्णीम समय र एम्बुसमा ६ वर्ष नामक पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन् । ३७८ पृष्ठ लामो पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको हो भने यसको मूल्य ४५० रुपैयाँ रहेको छ । विमोचनको अवसरमा पुस्तकमा केन्द्रित भएर बनाइएको वृत्तचित्र स्कुल बेच्ने बालक पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।